Naya Post Nepal | भ्वाईस किड्समा जेनिसले दुईहात जोडेर स्वर्गवासी आमासंग आशिर्वाद मागेको दृश्यले सबैलाई रु’वायो
भ्वाईस किड्समा जेनिसले दुईहात जोडेर स्वर्गवासी आमासंग आशिर्वाद मागेको दृश्यले सबैलाई रु’वायो
सुमधुर स्वरका धनी ११ बर्षिय बाल गायक जेनिस उप्रेती चर्चित रियालिटी सो ‘द भ्वाइस अफ किड्स’को फाईनलमा प्रवेश गर्न सफल भएका छन्। अस्ति राती ८ बजेसम्म दर्शकले गरेको भोटको आधारमा जेनिश उत्कृट ८ मा पर्नु सफल भएका हुन्। दर्शकको भोटको आधारमा हिजो ८ जना बाहिरिएका छन् ।
जेनिश संगैं ८ जना फाईनल राउण्डमा प्रवेश गरेका छन् । टिम प्रमोदमा रहेका जेनिसको आमा लगभग ६ महिना अघि मात्रै क्यान्सरसंगै कोरोनाको कारण मृत्यु भएको थियो । उनको आमाले जेनिसलाई एक सफल गायक बनाउने सपना देखेकि थिइन् ।
चितवनको मोडन र्बोडिङ स्कुलमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत जेनिसलाई यो सिजनको दावेदार मान्न थालिएको छ । ब्याटल राउण्डमा दिप्सन खत्री र निमेश शर्मालाई पछि पार्दै लाइभ राउण्मा प्रवेश गरेका जेनिशले ब्याटल राउण्डमा उदित नारायणको स्वरमा रहेको “यो गाउँको ठिटो म” बोलको गीत गाएका थिए ।
पछिल्लो लाईभ राउण्डमा प्रमोद खरेलको यो कुरा गोप्य नैं राखौंला …. बोलको गित गाएका थिए । हिजो भएको सेमिफाईनल राउण्डमा जेनिशले गायक आनन्द कार्कीको जनम जनम ज्युउला संगैं …. बोलको गित सुनाएका थिए ।
कोचहरुसंग कुरा गर्दै हिजोको शोमा जेनिसले निधन भएकी आफ्नो आमासंग दुई हात जोडेर आशिर्वाद मागेको दृश्यले सबैलाई भावुक बनाएको थियो। हेटौडामा जन्मेका जेनिशले झन्डै ८ बर्ष झापामा मावलीघरमा बितेको थियो । सोही क्रममा जेनिशले संगीतको कक्षा शुरु गरेका थिए ।
जेनिसालाई भोट गर्नको लागि खाल्ती एप्स डाउनलोड गर्नुपर्नेछ । सोही एप्स मार्फत आफुले चाहे अनुसार अधिकतम् करिव पाँच हजार मुल्य बराबरको भोट गर्न सकिनेछ भने एक दिनमा एक भोट निःशुल्क पनि गर्न सकिनेछ ।
२०७८ पुष २५, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 173 Views